Westminster Castle sekuyisikhathi eside litshwayo Lutsk lasendulo. Izindonga zayo njalo wakhumbuza ngabo izakhamuzi nezivakashi ukuvakashela leli zwe elihle. uvame ukubizwa ngokuthi le nqaba Lutsk. Ukubona lokhu wobuciko yezakhiwo zingatholakala at zonke sinyathelo - kusukela odonsa Zithokozise igama elithi "Luck" ukuze logo izinhlangano ezihlukahlukene futhi ukulibona kwezentengiselwano.
Izikhulu ezintathu ozalwa
Lutsk castle, noma inqaba of Westminster, ukudalulwa kwalo okungahle itholakala zonke isiqondiso ekuphileni naseVolyn, has umsuka lasendulo. Ngokokuqala ngqá igama castle Yavela ngasekupheleni XIX zemihla leminyaka. Ngaleso sikhathi abantu ubudala ukukhumbula igama nezakhiwo zasendulo - Witold castle. ukwakhiwa kwalo kwakuhambisana nezinga igama edume of Witold, ngubani ngaphezu kwesikhathi esisodwa zazibambe ukuphathwa inhlabathi Lithuanian.
Ekuqaleni lesi sakhiwo ezenziwe ngokhuni. Ngisho esikhathini sethu, abavubukuli baye bathola izinsalela ze-izakhiwo sokhuni, ezindala kunazo zonke kuzo luhlehlela emuva ekuqaleni kwekhulu XII. Ngeshwa, sasingazi ngonyaka esiqondile isisekelo enqabeni Lutsk, kodwa ngo-1100 wayaziwa futhi okukhulunywa ngaye emibhalweni abathengisi ephakathi abahambi basendulo. Amagama abaklami abakhi izakhiwo ebiyelweyo kwalahleka ekujuleni isikhathi yaqhubeka ingaziwa kubacwaningi esizayo. Ikakhulu Lutsk castle ngesitayela okusikhumbuza izinqaba of Western Europe ngaleso sikhathi: isibonelo, enqabeni e Czersk, esemgwaqweni e Mazowieckie voivodship, angabhekwa umzalwane ukuba uqinise Lutsk. Ukubukeka lezi zakhiwo has eziningi esifana ngazo, futhi kungenzeka ukuthi zombili lezi zakhiwo zakhiwa phrojekthi efanayo.
Ngenxa kungathembeki enqabeni ngokuvamile izinkuni esivuthayo, futhi ngenxa yalokho kwanqunywa ukuba uqinise isitini yayo izindonga. Esikhathini Maphakathi nekhulu XIV kwakuvele eyakhelwe ingxenye umbhoshongo, okuyinto manje iqanjwe kwangaphakathi, futhi iningi lomuzi. Ukubamba iqhaza ekwakhiweni kwalesi izinqaba wathatha umbusi Galicia-naseVolyn ubukhulu Lyubart Gediminovich. Ngokuthakazelisayo, umbhoshongo emnyango enqabeni Lutsk uthela iminonjana ekupheleni. Ngemva kokuphothulwa isikhulu wanquma ukuthi ukuphakama umbhoshongo main alanele ukugcina indawo, noma ukuziphatha impi. Wayala ukuqedela umbhoshongo ambalwa amamitha angu. Kodwa ukuphakama zezakhiwo ezindala kungenziwa kalula elibonakala amazinyo. Bona azungeze umbhoshongo izindonga yokungena ye Lutsk Castle Duke of Westminster (v x B). Ngaphandle koku ngenayo, enqabeni kunezinhlobo ezingaphezu zakhiwo ezimbili ezinde - Styrovaya futhi Svidrigailov.
Ukwakhiwa enqabeni baqhubeka ngemva kokufa Westminster. Vytautas - Prince entsha Galicia naseVolyn Lutsk wenza dolobha elihle aseningizimu Grand Duchy of Lithuania. Kwaba ngaphansi kokubusa kwakhe, idolobha iqhakazile ngokugcwele, kanye Lutsk castle atholwe ezakheke yesimanje. Ngo kokufa Vytautas liqala ukubusa, umfowabo Svidrigaylo abaqede kabusha. Futhi enqabeni baba elifana sibona manje. Kuyinto ngokusebenzisa lezi zikhulu ezintathu Lutsk edwaleni yasinda kube yilolu suku.
Lutsk castle naseVolyn kwaba inhliziyo futhi isikhungo yayo zokuphatha, khona enkolo nawezombusazwe. Bambalwa abantu bazi ukuthi forecourt enqabeni yayisetshenziswa njengesikhungo indawo isigwebo, futhi izindonga isakhiwo wenkantolo lasendulo wasebenza. Kukhona futhi isikhathi eside isinyathelo lombhishobhi Orthodox wabo. Ioanna Bogoslova, izinsalela lapho kungabonwa uma uvakashela isiboshwa Lutsk castle. Lona esontweni lokuqala e naseVolyn futhi isakhiwo endala kwetshe Lutsk, walondoloza, ngeshwa, kancane kuphela. ezindongeni zethempeli zazakhiwe plinths - okubizwa ngokuthi setshe flat futhi ebanzi Stony impahla, elivame ukusetshenziswa ukuze kwakhiwe amasonto namathempeli kuleli Kievan Rus futhi eMbusweni WaseByzantium.
Ukhohlwe amakhulu eminyaka komhlaba Lutsk castle ukugcina izimfihlo eziningi. Ngokokuqala ngqá abacwaningi bakwazi ukungena ku ukujula yabo ekupheleni kwekhulu XIX. Abakwazi ihlukaniswe izingxenye ezimbili - emathuneni isonto I. Isazi noveranda eziyinkimbinkimbi ububanzi. Mhlawumbe kungalesi igceke lesonto Yithuna we Westminster edume - umsunguli enqabeni. Izivakashi avunyelwe nokuhlola ezinye imihubhe ne ziphephile. Ezinye izindaba zika-isonto ivaliwe izivakashi.
Self-Galicia-naseVolyn ubukhulu yayikhona ngaphambi 1452. Ngemva kokufa Svidrigaylo okhiye Lutsk castle, futhi konke ukubusa iyonke, ke yanikwa induna yedolobha, Pan Nemyria. Kusukela kuleso sikhathi ubukhulu elahlekile uzibuse, nababusi balo kukhona akhonze senkosi yase Lithuania, Poland bese Russia.
Ekhulwini XVI enqabeni Lutsk wema ngendlela eziningi Tatar Ukuhlasela. Kakade 1508 inqaba ezinezivikelo eziqinile of Westminster wakwazi ngempumelelo ukumisa AmaTatar - izindonga eziphakeme inqaba kuvikelwa elihamba induna Lukasha Moravtsa.
Maphakathi nekhulu XVI enqabeni ilahlekelwe simo sayo njengemholi yokuhlala isikhulu, kodwa agcinwayo ukubaluleka yayo sabaphathi zokuphatha. Isakhiwo eyinhloko egcekeni inqaba Bekumumuzi uJehova, okuyinto lalihlala abameleli isonto. kwemibhoshongo zewayini zazisetshenziswa njengezibonakaliso ejele futhi wagwetshelwa ukufa elinde inani elikhokhiwe ngesikhathi Market noma Castle Square komuzi.
Incithakalo nokuzalwa kabusha
Ngo 1795 Lutsk baba ingxenye yoMbuso Russian. Lutsk castle walahlekelwa ukubaluleka kwayo zokuphatha kanye kancane kancane waqala ubole. Ekhulwini XIX kuhulumeni edolobheni ngisho wakhipha isimemezelo esikhethekile okuvumela itshe ukuthatha izidingo zabo siqu. Iqiniso lokuthi le nqaba sasingawohloki ngokuphelele, waphinda kufakazela ubuqotho abakhi Lyuberta - wokwakha sasinamandla kangangokuthi ukuqaqa odongeni kwaba nzima. Ngo-1885, umbono enqabeni endala okushintshile, futhi ngisho waziwa ngokuthi ifa zomlando. Wayephila ngesikhathi sezimpi ezimbili, Lutsk castle waqala alulame kancane kancane, futhi umsebenzi ezinkulu sokubuyiselwa kwenziwa engxenyeni kwekhulu lamashumi amabili wesibili.
Le nqaba namuhla
Okwamanje Lutsk Castle - lena Museum eziyinkimbinkimbi kakhulu, ehlanganisa inkathi esukela ekhulwini XIII kuze kube namuhla. Ijwayele futhi ukumema masquerades, izingqungquthela kanye tournaments jousting. Ukukhangana main kwedolobha Lutsk ivuliwe ngoba abavakashi. Ukuze izivakashi zikhona izinhlelo ezahlukene bezijabulisa futhi ezemfundo kuyiphi ungafunda amaqiniso ethakazelisayo ngokuphila enqabeni amakhulu eminyaka. Ukuvakashela leli emehlweni kuyoba mnandi for abantu babo bonke ubudala nobuzwe.
Medal "Ukuze Ukunqoba phezu eJalimane" - ukuhlonishwa ethandwa
Isikhangiso. Umbono isiko.